मानव अधिकारको प्रथम दस्तावेज मानिने म्याग्नाकार्टा के हो ? यसमा के व्यवस्था गरिएको छ ?
Law Hub Nepal जेठ २१, २०७७
ल हब नेपाल । म्याग्नाकार्टा बेलायती जनताको नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने प्रथम लिखित दस्तावेज हो । बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा म्याग्नाकार्टालाई स्वतन्त्रताको बडापत्र पनि भनिन्छ ।
‘म्याग्नाकार्टा’ ल्याटिन भाषाको शब्द हो । यसलाई ल्याटिन भाषामै लेखिएको थियोे । यसको अर्थ ‘महाधिकारपत्र’ भन्ने हुन्छ । यो चर्मपत्रमा लेखिएको थियो । यसले विश्वमा मानव अधिकारको प्रथम दस्तावेजको उपमा समेत पाएको छ ।
‘बाइबल अफ इंग्लिस कन्स्टिच्युसन’ भनेर म्याग्नाकार्टालाई भनिन्छ । यसको आधिकारिक अंग्रेजी नाम ‘Article of the Barons’ हो । म्याग्नाकार्टाका साथै बिल अफ राइट्स (१६८९) र पेटिसन अफ राइट्स (१६२८) लाई बृटिश संविधानका बाइबल भनेर नाम दिने व्यक्ति पिट द एल्डर हुन् ।
म्याग्नाकार्टा जनताको विद्रोहको उपज हो । धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारीतापूर्वक कर उठाउने राजाको कदम विरूद्ध पोपको नेतृत्वमा जनताले विद्रोह गरेका थिए । परिणामस्वरूप राजा जोन द्वितीयले १५ जुन १२१५ मा म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गरे ।
म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर हुनुलाई जनताको विजयको नाम दिइएको थियो । ब्यारोन पादरीहरूले म्याग्नाकार्टाको मस्यौदा तयार पारेका थिए । १२१३ मै यसको मस्यौदा गरिएको थियोे । यसका लेखक Stephen Langton थिए ।
म्याग्नाकार्टा बेलायती जनताको नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने प्रथम लिखित दस्तावेज हो । यसलाई बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा स्वतन्त्रताको बडापत्र पनि भनिन्छ । यसले विश्वमा मानवअधिकारको प्रथम दस्तावेजको उपमा समेत पाएको छ ।
रन्नीमेड भन्ने ठाउँमा Thames नदिको किनारमा बसेर म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । रन्नीमेड लन्डनदेखि दक्षिण- पश्चिमतर्फ १९ माइल टाढा पर्दछ । म्याग्नाकार्टामा ६३ धारा थिए ।
राजाले आफैंले हस्ताक्षर गरेको म्याग्नाकार्टाको पालना गरेनन्, फलस्वरूप ब्यारोन्सहरूले राजालाई गद्दीबाट हटाए र फ्रान्सका लुई आठौंलाई राजा बनाए । लुई आठौंलाई King of England पनि भनिन्छ ।
१९ अक्टोबर १२१६ मा जोन द्वितीयको मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि लुई आठौंलाई गद्दीच्यूत गरी जोन द्वितीयका छोरा हेनरी तृतीयलाई राजा बनाइयो । १२१६, १२१७ र १२२५ गरी तीनपटक म्याग्नाकार्टालाई संशोधन गरी राजा हेनरी तृतीयले पूर्णता दिएका थिए । ११ फेब्रुअरी १२२५ को म्याग्नाकार्टालाई फाइनल म्याग्नाकार्टा भनिन्छ ।
म्याग्नाकार्टाले कानूनको शासन, संसदको प्रभुत्व र न्यायीक निष्पक्षताको जग बसाल्नुको साथै सम्पत्तिको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै अनुचित करलाई नियन्त्रण गरेको थियो । म्याग्नाकार्टाको परिणामस्वरूप प्रचलनमा आएको पहिलो असाधारण क्षेत्राधिकार (रिट) बन्दीप्रत्यक्षीकरण (सन् १६७९) हो, जुन म्याग्नाकार्टाको धारा ३९ सँग सम्बन्धित छ ।
म्याग्नाकार्टाको चारवटा मूल प्रति हालपनि सुरक्षित छन् । जसमध्ये दुई प्रति लण्डनस्थित बृटिश लाइब्रेरीमा, एक प्रति Salisbury cathedral मा र अर्को एक प्रति Lincoln cathedral मा रहेका छन् ।
म्याग्नाकार्टाले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू :
राजाले संसदको अधिवेशन नियमित बोलाउनुपर्ने,
ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने,
संसदको स्वीकृतिविना राजाले कर उठाउन नपाउने,
सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदद्वारा निर्धारित गरिने,
कानून र सोको उचित प्रक्रियाविना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुन्न र देशनिकाला गर्न नपाइने,
कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी सजायको भागीदार नबनाइने साथै कसैलाई मृत्युदण्ड नदिइने,
लण्डन तथा अन्य शहरहरूमा आफ्ना प्रथाहरू सञ्चालन गर्न पाउनुका साथै चर्चलाई स्वायत्तता प्राप्त हुने,
न्याय दिनमा ढिलाइ एवं इन्कार नगरिने,
विधवालाई पुनः विवाह गर्न बाध्य नपारिने,
जनतालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, जथाभावी सजायविरूद्धको अधिकार साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष पूर्पक्षको अधिकार प्राप्त हुने ।
म्याग्नाकार्टाको धारा १ मा चर्चको स्वायत्ततासम्बन्धी कुरा छ । धारा २८, ३० र ३१ मा वैयक्तिक सम्पत्तिको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ३८, ३९ र ४० मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको वर्णन गरिएको छ । धारा ३९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानून अनुसार नै दण्ड दिइने कुरा उल्लेख छ ।
धारा ४० मा ‘हामी (राजाले) कसैलाई पनि अधिकार र न्याय बेच्ने छैनौं, न्याय प्रदान गर्ने काममा पनि ढिलाइ गर्ने छैनौं र न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौं’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । धारा ५४ मा राजाले कानून जान्नु र मान्नु पर्दछ भनिएको छ ।